Golfa Kalifornia: toetra, fananganana ary biodiversité | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Portillo Alemanina | 22/02/2021 10:08 | Haibolantany
Androany isika hiresaka heloan'i california. Io no ranomasina tanora indrindra eto an-tany. Manana ny fiaviany izy io noho ny fizotran'ny jeolojika sy ny fivezivezin'ny takelaka eo anelanelan'ny ampahan'ny ranomasimbe Pasifika sy ny crust izay mamorona kaontinanta amerikana. Izy io dia fonenan'ny karazan-javamananaina betsaka ary ny ankamaroany dia voaaro raha misy ny fiantraikany sasany misy noho ny olombelona sy ny asany.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny toetra rehetra, ny fiaviany ary ny fananganana ny Hoalan'i Kalifornia.
2 Biodiversity an'ny Hoalan'i Kalifornia
3 Ny fiantraikan'ny tontolo iainana any amin'ny Hoalan'i Kalifornia
4 Drafitra fiarovana
Io no ranomasina tanora indrindra eto ambonin'ny planetantsika. Ny niandohany dia avy amin'ny fivezivezin'ny takelaka amin'ny Oseana Pasifika sy ny crust izay mamorona an'i Amerika. Ny hetsika ananan'ireto takelaka ireto nanamontsana ny vovonan'ny fanambanin'ny ranomasina tokony ho 12 tapitrisa taona lasa izay. Tonga ny fotoana nitrangan'ny ranomasina avy any Pasifika nanatona ny avaratra ary niafara tondra-drano ny fantsakana iray manontolo. Tamin'izany fotoana izany dia efa niforona ny proto-golfo. Io siny io dia nivoatra tsikelikely tao anatin'ny rafitry ny lesoka ara-jeolojika. Amin'izao fotoana izao, ny lesoka rehetra amin'ity rafitra ity dia miitatra hatrany am-bavan'ny Helodrano Kalifornia ka hatrany amin'ny farany avaratry azy. Izany no antony nisarahan'ny saikinosy Baja California sy ny kontinanta amerikana avaratra.
Miadana be ny hetsika fa tsy miova. Mandritra ny an'arivony tapitrisa taona dia hisaraka tanteraka izy io amin'ny farany. Ny lesoka San Andrés dia iray amin'ireo malaza indrindra eran'izao tontolo izao ary izy no manasaraka an'io ampahany io. Nandritra izay dia an-tapitrisany taona maro ny Helodranon'i California dia nanjanaka tsikelikely ny harena voajanahary lehibe. Ny zavamaniry sy ny karazam-biby maro karazana dia manana onenana amin'ity toerana ity.
Biodiversity an'ny Hoalan'i Kalifornia
Amin'izao fotoana izao, noho ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fiovan'ny haavon'ny ranomasina, dia novaina ny fahasamihafan'ny velaran-tany. Tokony ho ao an-tsaina fa, hatramin'ny niforonan'ny Helodrano Kalifornia, dia nisy ny fiovan'ny toetr'andro nahatonga ny fiovan'ny haavon'ny ranomasina, ny fiantraikan'ny jeolojika sasany izay namorona ny tendrombohitra, ny bay ary ny nosy, sns. Ireo fiovana sy hetsika ara-jeolojika sy toetr'andro rehetra ireo dia nahatonga ny Hoalan'i Kalifornia ho iray amin'ny ranomasina manankarena indrindra amin'ny planetantsika. Izy io dia manana karazan-karazany maro karazana sy hatsaran-tarehy mahavariana izay feno loko mifanohitra.
Ny Golfa any an-tampon'i California dia manolotra rafitra atsinanan'ny Nosy lehibe any atsimo. Ao amin'ireo nosy rehetra, ny tena misongadina indrindra dia ny Ángel de la Guardia Island sy Tiburon Island. Karazam-borona maro karazana no mipetraka ao amin'ireny faritra ireny ary voaro. Amin'ny ilany avaratra dia faritanin'ny Desert Altar sy ny vavan'ny Ony Colorado. Ny asan'ny renirano Colorado dia ny manome antsanga sy rano amin'ny renirano hatramin'ny nananganana ny Hoalan'i California. Ny fisian'ity renirano ity dia nanome fepetra manokana ho an'ity faritra iray manontolo ity. Misaotra an'io, navela ny fivelarana rojo sakafo sarotra sy zavamaniry ary karazam-biby maro karazana.
Noho ny fepetra rehetra noresahinay sy ny fisian'ity renirano ity dia azo atao ny mamorona karazana endemika izay, atahorana ho lany tamingana ankehitriny. Amin'ny maha karazana endemika azy dia velona ihany izy io ary hitan'izy ireo ity toerana ity. Antony iray mahatonga azy io atahorana ho lany tamingana. Satria manana faritra zarazaraina kely kokoa izy io, dia karazan'olona marefo kokoa amin'ny fihetsiky ny olombelona izany. Tranga misy karazana endemika atahorana ho lany tamingana dia ny vaquita marina. Izy io dia iray amin'ireo cetaceans kely indrindra misy ary miaina manokana ao amin'ny Helodranon'i Kalifornia. Tombanana fa misy olona an'arivony vitsivitsy amin'izao fotoana izao, saingy io isa io dia avo kokoa noho ny fipetrahan'ny olombelona.
Ny fiantraikan'ny tontolo iainana any amin'ny Hoalan'i Kalifornia
Ny reniranon'i Colorado dia mihabe ny fidiran'ny rano any amin'ny Helodranon'i Kalifornia. Tsy maintsy raisina fa ny ampahany betsaka amin'ny renirano amin'ity renirano ity dia ampiasaina amin'ny hetsiky ny olombelona any amin'ny faritra. Izany no nahatonga ny mihasimba ny toeram-ponenan'ny karazany maro ary simba ny fahaveloman'ny karazana maro. Amin'izao fotoana izao dia nisy programa nasionaly nampiharina mba hahafahana mandinika sy mitahiry ampahany betsaka amin'ny karazany toy ny marina vaquita marina, ary koa cetacean hafa toa ny trozona manga, trozona sperm, trozona fanairana ary orcas. Ny tanjon'ireto programa ireto dia ny hahafahana mifehy ny asan'ny olombelona amin'ny fomba iray mba ahafahana mitahiry ny fonenana voajanahary amin'ny toerana tsara.
Etsy ankilany, misy ihany koa ny fiatraikany amin'ny tontolo iainana vokarin'ny fampandrosoana ny indostria. Ho fitsimbinana tsara kokoa ny harena voajanahary amin'ny Hoalan'i California, indostria natokana ho an'ny fizahan-tany fizika sy fizahantany novolavolaina. Ireo indostria ireo dia nampivoatra am-pahamendrehana amin'ireo faritra manana harena voajanahary lehibe indrindra hanakaikezana ny natiora ary hampahafantatra momba ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny zava-manan'aina. Mandritra izany fotoana izany, ny sasany amin'ireo toerana fizahan-tany nentim-paharazana dia afaka nanatsara ny serivisin'izy ireo hahafahany manolotra fitsangantsanganana fohy kokoa nefa hafa miaraka amin'ny fizahan-tany ecotourism sy sports.
Izany rehetra izany dia natao mba hampisy zavatra manakaiky kokoa ny fizahan-tany mahazatra amin'ny hetsika toy ny fijerin'ny vorona sy ny trozona. Manomboka amin'ny tendrombohitra ka hatrany amin'ny fanatanjahan-tena ary ny kayak miaraka amin'ny bisikileta an-tendrombohitra dia lasa hetsika tena takiana.
Ny tanjon'ny drafitra fiarovana dia ny ahafahana mitahiry ny Helodrano Kalifornia mba hahafahany mahazo sy maharitra ny karazan-javaboahary mifamatotra mifandray. Inona koa, Ny tanjona dia ny hahafahan'izy ireo mamokatra entana sy serivisy ilaina ho an'ny fiarahamonina, mamahana ny toekarena eo an-toerana nefa tsy misy fiatraikany ratsy amin'ny tontolo iainana.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny Helodranon'i Kalifornia sy ireo mampiavaka azy ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haibolantany » Hoalan'i california
Fampitahana nataon'i Maxwell